Fosil na-ewebata Smart Wear OS ọhụrụ na IFA 2019 | Akụkọ akụrụngwa
Fosil na-eji wear OS wepụtara smartwatches ọhụrụ na IFA 2019
Eder Esteban | | Ngwa, smartwatch
Fosil bụ otu n’ime ụdị ama ama ama ama ama ama ama ama. Ha nwere ụdị ụdị dịgasị iche iche na Wear OS, nke na-eto eto ugbu a na IFA 2019. branddị ahụ hapụrụ anyị nso nso a. na elekere Puma, ewetara n’ụbọchị mbụ nke IFA a. Ugbu a, ha hapụrụ anyị ụdị ọhụụ nke aka ha na ọkwa ha.
N'ọnọdụ niile anyị na-ahụ nche na-eji Wear OS dị ka sistemụ arụmọrụ. Fosil bụ otu n'ime ụdị ndị na-akwalite nke kachasị na nke kachasị nke ọma na sistemụ arụmọrụ Google maka elele anya. Na mgbakwunye na ụdị Puma kwuru, ha hapuru anyi ohuru ohuru nke mmasị.
1 Ọgbọ nke ise
2 MK Nweta Lexington 2
Ọgbọ nke ise
Companylọ ọrụ ahụ hapụrụ anyị n'otu akụkụ na ọgbọ nke ise nke elekere ya. Anyị na-ahụ smartwatch nke na-abịa na ọnọdụ batrị agbatị, nke ga-enyere anyị aka gbatịkwuo oge ya ruo na nke kachasị, wee nwee ike ịga n'ihu jiri ya ọtụtụ ụbọchị ọbụlagodi na anyị enweghị ike ịkwụ ụgwọ ya.
Ihuenyo dị na nche Fosil a dị nha 1,3 dị nha. Dị ka ọ dị na mbụ, ihuenyo mmetụ aka, nke na-eji ejiji ọhụrụ eyi OS, yabụ igodo dị mfe na nke a. Ike nchekwa nwere okpukpu abụọ na ọgbọ ọhụrụ a na nke ise nke ika ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, a na-ewebata ikuku na-akwụ ụgwọ na ya, nke bụ akwụkwọ ọhụrụ ọzọ nwere mmasị maka ndị ọrụ. O nwere ọkà okwu nke ga-enyere anyị aka ịkpọ ma ọ bụ zaa.
Dị ka ọ bụ omenala maka elekere Fosil, eriri eriri nwere ike ịgbanwe. Anyị na-ahụ ụdị eriri dị iche iche ịhọrọ site na, yana ọtụtụ ihe, site na eriri akpụkpọ anụ na nke silicone. Enwere ike ịzụta elekere a ugbu a na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ahụ dị ọnụ ahịa na $ 295.
MK Nweta Lexington 2
Modeldị ọzọ dị na Fosil na-ebupụta n'ime akara Michael Kors. Ha na-ahapụrụ anyị otu elekere emere na igwe anaghị agba nchara, nke na-ewepụta usoro mara mma karịa, nke doro anya na ọtụtụ ndị ọrụ nwere mmasị, ebe ọ bụ na egosiri ya dịka nhọrọ iji mee ihe kwa ụbọchị ma ọ bụ nwee ike iyi akwa.
Eziokwu bụ na ọ na-ahapụ anyị ka anyị nwee ọtụtụ ọrụ ọhụụ, dịka nke elekere ndị ọzọ. Ọ kachasị n’ọhịa mkpọ ebe anyị na-ahụ mgbanwe ndị ọzọ na nche a site na Fosil. Ọ na-abịa na ụdị batrị anọ na nke a.
Ọdọtị batrị agbatịrị nke na-enye gị ohere iji nche ruo ọtụtụ ụbọchị, mana ọ bụ naanị ọrụ ya bụ isi.
Ọnọdụ Daily na-enye ọtụtụ ọrụ ohere ma na-echekwa ihuenyo ahụ.
Customdị omenala ma ọ bụ Customdị Omenala nke na-enye ohere ka ị gbanwee ojiji nke ọrụ ahụ maka mkpa gị.
Oge-Naanị Ọnọdụ ga-egosi naanị oge na ihuenyo ahụ, dị ka elekere nkịtị.
Na mgbakwunye, dịka ọ dị na elekere Fosil, ọ nwere ọkà okwu ga-enyere anyị aka ịza oku mgbe niile. Emeelarị elekere a na weebụsaịtị nke ika ahụ na a price nke $ 350 price. Enwere ike ịzụta ya na ọla edo, ọla ọcha, ọla edo ma ọ bụ agba agba abụọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Fosil na-eji wear OS wepụtara smartwatches ọhụrụ na IFA 2019
Ngwaọrụ ejiri aka na-enye anyị ohere ijikọ ngwaọrụ mgbanaka anyị niile
Energy Sistema na-enye Smart Speaker Wake Up, onye na-ekwu okwu mkpu na Alexa